JW.ORG Video Boa Sukuufo a Wɔwɔ South Korea
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
SOO-JEONG yɛ ofotufo wɔ ntoaso sukuu bi mu wɔ South Korea. Oyii video a ɛwɔ jw.org wɛbsaet so no kyerɛɛ ne sukuufo. Asɛm a ɔkae ni: “Pɛ ani bɛhwɛ nea sukuufo no yɛe. Bere a wɔhwɛɛ video a ɛne Yɛka Adamfo Paa a, Ɔne Hena? wiei no, wɔn ani gyee paa! Wɔn mu bi kaa sɛ, ‘mennwenee adamfofa ho nkɔɔ akyiri saa da. Ɛyɛ ɔkwan foforo koraa a wɔfa so kyerɛ ade!’ Ebinom nso kaa sɛ bere biara a wohia afotu no, wɔbɛkɔ wɛbsaet hɔ.” Soo-jeong toaa so sɛ: “Makamfo video yi akyerɛ me mfɛfo, na wɔn ani agye sɛ wɔde video a ɛte saa bɛkyerɛ ade.”
Video foforo a sukuufo a wɔwɔ South Korea ani agye ho paa ne Di Osisifo So Nkonim a Wontow Twɛre. Obi a ɔkyerɛ ade wɔ sukuupɔn mu, na ɔne adwumakuw bi a wɔhwɛ siw mmofra basabasayɛ ano yii saa video no kyerɛɛ sukuufo bi. (Juvenile Violence Prevention Foundation) Ɔkaa sɛ, “Mmofra pii ani gyee video no ho esiane nneɛma a ɛyɛ anika a wɔdrɔdrɔ wom no nti. Mfaso wɔ video no so paa efisɛ ɛnyɛ sɛnea obi begyina nsisi ano nko ho asɛm kɛkɛ na ɛka na mmom sɛnea ɔbɛtwe ne ho afi ho nso.” Adwumakuw no bisaa wɔn a wɔyɛɛ video no sɛ ebia wobetumi de video no aka nneɛma a wɔde kyerɛ sukuufo no ade no ho anaa. Wɔmaa wɔn kwan sɛ wobetumi ayɛ saa. Polisifo mpo de video ahorow a ɛwɔ jw.org so no reyɛ adwuma.
Sɛ wunnya nkɔɔ wɛbsaet yi so a, bɔ mmɔden na kɔ hɔ. Ɛnyɛ den koraa sɛ wode wɛbsaet no bɛyɛ adwuma, na biribiara a wobɛtwe no—sɛ́ ɛyɛ nea wobɛbɔ atie, video, Bible, anaa nhoma biara no—wuntua hwee.